डीसी महानगर क्षेत्रमा “धन्यवाद दिवस”को लागि कुन समयमा राजमार्गमा हिड्नु उपयुक्त ? - Enepalese.com
डीसी महानगर क्षेत्रमा “धन्यवाद दिवस”को लागि कुन समयमा राजमार्गमा हिड्नु उपयुक्त ?
इनेप्लिज २०७५ मंसिर ४ गते २:४७ मा प्रकाशित
“धन्यवाद दिवस”थ्याङ्कसगिभिङ् डे इसाईहरुको एउटा प्रमुख चाड हो । अमेरिकामा यो पर्व अझ उत्साहजनक रुपमा मानिन्छ । यो अमेरिका र क्यानडामा मनाइन्छ । अमेरिकामा यो नोभेम्बर महिनाको चौथो बिहिबार र क्यानडामा दोस्रो सोमबार पर्छ । अमेरिकामा यस दिन सार्बजनिक बिदा हुन्छ । वास्तवमा यो दिवस फसल (बाली) फलेको खुसीयालीमा मनाइने हो। यो भगवानलाई धन्यवाद दिन मनाउने थालिएको चाड हो ।
अमेरिकामा धन्यवाद दिवस अर्थात् थ्याङ्कसगिभिङ् डेको भोलिपल्ट शुक्रबार पर्छ । उक्त शुक्रबारलाई कालो शुक्रबार (ब्ल्याक फ्राइडे )भनिन्छ। उक्त कालो शुक्रबार को दिन अत्यधिक सस्तोमा सामान बिक्रि गरिने हुनाले सामान पसलहरुमा किन्नको लागि मानिसहरुको अत्यधिक भिड हुन्छ । यस दिन अमेरिकामा सबैभन्दा बिक्रि हुने दिन हो ।
अमेरिकामा बिमा,सवारी साधन ,बैंक आदी इत्यादीमा १ सय १६ बर्ष अगाडी देखि नै काम गर्दै आएको ” ट्रिपल ए ‘ AAA नामक संस्थाले सन् २००५ मा देखिएको भिड भन्दा ज्यादा हुने जानकारी गराएको छ ।
ट्रिपल ए का अनुसार नोभेम्बर २० मंगलबारका दिन ५ बजे देखि राति ७ बजे सम्म सवारी साधन (यातायात)को निकै चाप हुने बताएको छ । बिशेष गरि डिसी महानगर क्षेत्रको अन्तरराज्य ४९५ राजमार्गको फेरोमा निकै भिड हुने भबिष्यवाणी गरेको छ ।
साथै अन्तरराज्य राजमार्ग ९५ मार्गबाट यात्राको कारण ३० देखि ४० प्रतिसत यातायात भिड बेल्टवेमा हुने उल्लेख गरेको छ । उक्त स्थानमा अन्य समयको भन्दा दोव्वर भिड हुने जनाएको छ । धन्यवाद दिवसको अवधिमा कम्तिमा ५४ मिलियन ( ५ करोड ४० लाख ) यात्रीहरुले यात्रा गर्ने जनाएको छ ।
साथै ट्रिपल ए का अनुसार शुक्रबार र शनिबार मा यात्रा गर्नु धन्यबाद दिवस कै दिन(बिहिबार) शुक्रबार र शनिबार उत्तम हुने डब्लटिओपी डटकमले जनाएको छ ।